Mpempe akwụkwọ: Obere Business Dị Ka Ndị Na-eme Ihe Na-eme Ka Ndị Cyber ​​Criminal
Ihe na-emebu na MNH Platinum, ụlọ ọrụ nke na-arụ ọrụ ụgwọ ụgbọala. Obereha maara na nanị pịa nke njikọ email nwere ike itinye azụmahịa ahụ n'ihe ize ndụ.
N'afọ gara aga, ụlọ ọrụ siri ike na Blackburn nwere faịlụ 12, 0000 dị na ụlọ ọrụ ahụnetwọk ezoro ezo. N'ikpeazụ, ndị omempụ chọrọ ka a gbapụta ihe ruru £ 3,000 iji wepụ faịlụ ahụ.
Na mgbalị nile iji wepụ nje ahụ n'ejighị ihe dị mkpa dị mkpa na-egosi na ọ gaghị ekwe omume,nzukọ ahụ enweghị ihe ọ bụla kama inye ụgwọ. Onye na-eduzi ụlọ ọrụ Mark Mark kwuru na ha adịghị njikeremaka uzo agha nke cyber n'ihi na eleghara anya ihe agha a nwere ike inwe na ulo oru - website mobile app development.
Nke a abụghị onye dịpụrụ adịpụrụ na ndị ọkachamara na-adọ aka ná ntị na obere ụlọ ọrụ ndị ahụihe ka njọ na iyi egwu cyber-agha ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ ha adịghị njikere.
Andrew Dyhan, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ụlọ elu Ọrụ Ntanetị, na-atụle ụzọ ndị omempụ cyber si emegide obere azụmahịa.
Ọkọ akụkọ ihe mere eme, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Obere na Ọkara (SMEs) abụghị ihe mgbaru ọsọ cyberma n'afọ 2015, Toni Allen, na-ekwu na ihe gbanwere n'ụzọ dị egwu. Dị ka otu nyocha nke gọọmentị mere banyere nkwụsịtụ nchebe,Pasent 75 nke obere azụmahịa kọrọ na e nwere ike ịwakpo ya na 2012 na ọnọdụ ndị ahụ mụbara na 2013 na 2014..
Ihe ndekọ sitere na Symantec, ụlọ ọrụ nke na-ejikọta na cyber nche na-egosi na ihe karịrị ọkara nkeEbumnuche ọkpụkpụ ọgụ na-eduzi site na email na 2012 bụ megide obere ụlọ ọrụ.
Usoro iwu ọhụrụ nke Europe na-eme ka mbipụta nke cyber nche maka SME dị oke egwuebe ọ bụ na ha nwere ebumnobi nke ichebe data ahịa. Usoro iwu a ga-eme n'oge na-adịbeghị anya ga-abịa na 2018 ma nwee ike ịmalitenzukọ ahụ agwụla pasent 4 nke ego ha na-enweta kwa afọ ma ọ bụ € 20m nke ọ bụla dị ukwuu maka ikwe ka mgbochi nchebe iji gbochie yana data onye ahịa.
Ndị omempụ na-achọpụta na SMEs dị ka ihe ndị dị nro na-abụ n'ọtụtụ ọnọdụ, ha bụ ọwa na nnukwu ụgwọ.
Mgbasa ozi Cyber ​​Streetwise, Ụlọ ọrụ Ụlọọrụ na-eme ka ihe ndị a pụta ìhèdị ka isi cyber egwu megide SMEs:
Mbanye mbanye anataghị ikike
Mwakpo ahụ na-eme mgbe ndị omempụ na-enweta netwọk otu netwọk site na ịmatakwuihe na-enweghị ike ịbanye na ngwa ahụ, na-eme ka ọ dịrị ha mfe ịnweta data ụlọ ọrụ.
Na - eme ma ọ bụrụ na ịme ihe dị egwu n'ọtụtụ ọnọdụ natara site na phishingemail na-ekpuchi ozi gbasara netwọk ọrụ. N'ikpeazụ, ndị omempụ na-arịọ maka ihe mgbapụta n'ókè nke £ 500 - £ 1,000 nanweta ikikere decryption.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị mmadụ bụ njikọ kachasị mfe na otu ihe nchedo nyere, yana ihe dị ịrịba amaakụkụ nke ihe mgbagwoju anya bụ ihe si na data efu ma ọ bụ kesaara onye na-ezighi ezi. Ọbụna ọgụ nkịtịnwere ike inwe mmetụta dị oke mkpa na ọnọdụ ebe PII dị egwu.
Ịjụ iwe agha
Mgbe otu nzukọ nwere oke ozi nke dị na sava ya na-agbanye site naọwa ọwa. Ụdị ọgụ ndị a nwere ike gbasaa ngwa ngwa na obere ego.
Ọ na - eme mgbe onye na - awakpo na - emetụta onye agadi na ụlọ ọrụ maịkwanye ma ọ bụ ịbanye na akaụntụ email ha ma mee ka onye nwere ikike ego kwụọ ụgwọ.